“မနကျဖွနျခဈြသူမြားနမှေ့ာ အထီးကနျြနမေယျ့ FA တှနေားထောငျဖို့ရိုကျကူးပေးခဲ့တဲ့ ရှထေူးရဲ့သီခငျြးလေး” - Cele Gabar
သီခငျြးကောငျးတှမြေားစှာကို ရေးစပျသီဆိုခဲ့တဲ့ရှထေူးကတော့ ဂီတခရီးလမျးကိုစတငျလြှောကျလှမျးခဲ့စဉျကတညျးက လူငယျပရိသတျတှအေကွိုကျတှစေ့တေဲ့သီခငျြးပေါငျးမြားစှာကို သီဆိုခဲ့တာယနအေ့ခြိနျထိလို့ပဲလို့ ဆိုရမှာပါ။အိမျထောငျကပြွီးနောကျပိုငျးမှာ မိနျးမဖွဈသူရဲ့ ဂရုစိုကျမှုကိုမြားစှာရရှိနတောကွောငျ့ အလှမျးအဆှေးသီခငျြးတှသေိပျမဆိုဖွဈတော့ဘူးလို့ ဆိုပါတယျ။
ဒါပမေယျ့အလှမျးအဆှေးသီခငျြးတှနေဲ့နာမညျရလာတဲ့ရှထေူးကတော့ မနကျဖွနျခဈြသူမြားနမှေ့ာဆှေးနရေမယျ့ တဈကိုယျတညျးသမားတှအေတှကျ သူ့ရဲ့သီခငျြးအဟောငျးလေးကို Music Video ပွနျလညျရိုကျကူးပွီး အမှီတငျပေးခဲ့ပါတယျ။အခုတငျပေးထားတဲ့ Unlucky Day သီခငျြးလေးကတော့ စတငျထှကျရှိခဲ့စဉျကတညျးက ပရိသတျတှအေကွိုကျတှခေဲ့တာဖွဈပွီး နှဈစဉျနှဈတိုငျးခဈြသူမြားနနေီ့းလာတဲ့အခြိနျရောကျရငျ လူငယျတှပေါးစပျဖြားမှာ ရပေနျးစားနကွေပါ။ဒီနှဈမှာတော့ ရှထေူးက သီခငျြးဗှီဒီယိုလေးကို အခြိနျမရှိတဲ့ကွားကရိုကျကူးပေးခဲ့တာဖွဈပွီး “Valentine’s Day မှာ Unlucky Day မဖွဈကွပါစနေဲ့လို့ အားလုံးကိုဆုတောငျးပေးပါတယျခငျဗြာ” ဆိုပွီး မြှဝပေေးခဲ့တာပါ။
ဒါ့အပွငျ “လိုအပျခကျြတှရှေိရငျလညျး နားလညျပေးကွပါခငျဗြာ.. Shooting တဈဖကျနဲ့အခြိနျသိပျမရလို့ ရာသီစာလေးကြှေးခငျြလို့ အမွနျလုပျလိုကျရတာ အားလုံးကို အားနာပါတယျခငျဗြာ” ဆိုပွီးဗှီဒီယိုလေးနဲ့ပတျသကျပွီး ပွောကွားခဲ့ပါသေးတယျ။ရှထေူးမအားတဲ့ကွားထဲက FA တှအေတှကျအမှီရိုကျကူးပေးခဲ့တဲ့ Unlucky Day ဗှီဒီယိုလေးကို ဆယျလီကမ်ဘာပရိသတျကွီးအတှကျ မြှဝပေေးလိုကျပါတယျနျော။
“မနက်ဖြန်ချစ်သူများနေ့မှာ အထီးကျန်နေမယ့် FA တွေနားထောင်ဖို့ရိုက်ကူးပေးခဲ့တဲ့ ရွှေထူးရဲ့သီချင်းလေး”
သီချင်းကောင်းတွေများစွာကို ရေးစပ်သီဆိုခဲ့တဲ့ရွှေထူးကတော့ ဂီတခရီးလမ်းကိုစတင်လျှောက်လှမ်းခဲ့စဉ်ကတည်းက လူငယ်ပရိသတ်တွေအကြိုက်တွေ့စေတဲ့သီချင်းပေါင်းများစွာကို သီဆိုခဲ့တာယနေ့အချိန်ထိလို့ပဲလို့ ဆိုရမှာပါ။အိမ်ထောင်ကျပြီးနောက်ပိုင်းမှာ မိန်းမဖြစ်သူရဲ့ ဂရုစိုက်မှုကိုများစွာရရှိနေတာကြောင့် အလွမ်းအဆွေးသီချင်းတွေသိပ်မဆိုဖြစ်တော့ဘူးလို့ ဆိုပါတယ်။
ဒါပေမယ့်အလွမ်းအဆွေးသီချင်းတွေနဲ့နာမည်ရလာတဲ့ရွှေထူးကတော့ မနက်ဖြန်ချစ်သူများနေ့မှာဆွေးနေရမယ့် တစ်ကိုယ်တည်းသမားတွေအတွက် သူ့ရဲ့သီချင်းအဟောင်းလေးကို Music Video ပြန်လည်ရိုက်ကူးပြီး အမှီတင်ပေးခဲ့ပါတယ်။အခုတင်ပေးထားတဲ့ Unlucky Day သီချင်းလေးကတော့ စတင်ထွက်ရှိခဲ့စဉ်ကတည်းက ပရိသတ်တွေအကြိုက်တွေ့ခဲ့တာဖြစ်ပြီး နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းချစ်သူများနေ့နီးလာတဲ့အချိန်ရောက်ရင် လူငယ်တွေပါးစပ်ဖျားမှာ ရေပန်းစားနေကြပါ။ဒီနှစ်မှာတော့ ရွှေထူးက သီချင်းဗွီဒီယိုလေးကို အချိန်မရှိတဲ့ကြားကရိုက်ကူးပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီး “Valentine’s Day မှာ Unlucky Day မဖြစ်ကြပါစေနဲ့လို့ အားလုံးကိုဆုတောင်းပေးပါတယ်ခင်ဗျာ” ဆိုပြီး မျှဝေပေးခဲ့တာပါ။
ဒါ့အပြင် “လိုအပ်ချက်တွေရှိရင်လည်း နားလည်ပေးကြပါခင်ဗျာ.. Shooting တစ်ဖက်နဲ့အချိန်သိပ်မရလို့ ရာသီစာလေးကျွေးချင်လို့ အမြန်လုပ်လိုက်ရတာ အားလုံးကို အားနာပါတယ်ခင်ဗျာ” ဆိုပြီးဗွီဒီယိုလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး ပြောကြားခဲ့ပါသေးတယ်။ရွှေထူးမအားတဲ့ကြားထဲက FA တွေအတွက်အမှီရိုက်ကူးပေးခဲ့တဲ့ Unlucky Day ဗွီဒီယိုလေးကို ဆယ်လီကမ္ဘာပရိသတ်ကြီးအတွက် မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်နော်။